BULATSA sy IATA hamolavola paikadin'ny habakabaka ho an'i Bulgaria
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » BULATSA sy IATA hamolavola paikadin'ny habakabaka ho an'i Bulgaria
Febroary 27, 2018
Ny International Air Transport Association (IATA) sy ny BULATSA, ny Bulgarian Air Navigation Service Provider, dia nanaiky ny hamolavola sy hampihatra ny paikadim-piaramanidina nasionaly Bulgarian.
Ny BULATSA sy ny IATA dia hanamafy ny fiaraha-miasa misy ataon'izy ireo amin'ity tetik'asa ity, izay mikendry ny hitondra tombony ho an'ny besinimaro mpandeha, sady manohana ny fitomboan'ny harinkarena nasionaly sy ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina Bolgara.
Ny fangatahan'ny mpandeha amin'ny fitaterana an'habakabaka any Bulgaria dia tokony hitombo avo roa heny ao anatin'ny roapolo taona manaraka. Ny fanompoana an'io fangatahana io, na dia miantoka ny fiarovana azy ireo aza, ary mitantana ny vidiny, ny famoahana sy ny fanemorana CO2, dia mitaky an'i Bulgaria hanatsara ny habakabaka sy ny tambajotram-pifandraisana Air Traffic Management (ATM). Ny fanavaozana ny habakabaka mahomby dia andrasana hamorona tombony lehibe, miteraka € 628 tapitrisa fanampiny amin'ny harinkarena faobe isan-taona sy asa 11,300 2035 isan-taona amin'ny taona XNUMX.
BULATSA sy IATA dia nanolo-tena hiara-hiasa sy amin'ny mpiray antoka amin'ny seranam-piaramanidina rehetra hanolotra sy hampihatra ny Paikadim-pirenena Airspace ho fanohanana ny hetsika Eraopeana tokana Sky (SES). Ny lafiny lehibe amin'ny paikady dia ny fitarihana ny fahaiza-mitarika sy ny fomba fiasa miaraka amin'ireo mpiray antoka, ny fitantanana ny habakabaka ary ny fanavaozana ny rafitra ATM.
Georgi Peev, Tale Jeneralin'ny BULATSA, dia nanazava hoe: "Ankasitrahako ity fandraisana andraikitra ity, izay hanohana ny fivoaran'ny teknolojia sy ny asantsika. Ny fampandrosoana ny paikadim-pirenena dia hanatsara ny fiaraha-miasa tsara amin'ireo mpanjifantsika sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay ary handray anjara amin'ny fanatrarana ny tanjona avo lenta amin'ny SES. Ny fampiharana ireo tetik'asa manan-danja an'ny BULATSA mifandraika amin'ny fandaminana indray ny habakabaka sy ny fahaiza-manao hahatratra ny haavon'ny fivezivezena miaraka amin'ny fitomboan'ny fahasarotan'ny asa dia manitatra ny fototry ny fandefasana ireo tanjona kendrena BULATSA. ”
Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA, dia nilaza fa: “Bulgaria dia hanana toerana lehibe kokoa eo amin'ny habakabaka eropeana satria mitombo ny fifamoivoizana Atsinanana-Andrefana amin'ny taona ho avy. Ary Bulgaria mihitsy dia toekarena mitombo haingana izay hahita fitomboan'ny mpandeha marobe. Ny fiantohana fa manatsara ny habakabaka mba hiatrehana ny fitomboan'ny fifamoivoizana dia handray soa tsy ny Bulgaria ihany fa ny vahoaka be eropeana mpandehandeha. Rehefa mandray ny fiadidian'ny Vondrona Eropeana i Bulgaria, ity fanoloran-tena amin'ny fananganana stratejika nasionalin'ny habakabaka ity dia mariky ny firenena manatanteraka andraikitra ara-pahefana stratejika. Miarahaba ny BULATSA izahay noho ny fahitany ary manantena ny fiaraha-miasa amin'izy ireo mba hahomby amin'ny fanavaozana ny habakabaka. "
Ny paikadim-pirenena Bulgarian National Airspace dia misy:
• Fanatsarana ny fandrindrana ny sidina mahomby kokoa;
• Fanatsarana ny habakabaka amin'ny sehatra isam-paritra ary koa eo amin'ny faritra;
• Fampitomboana ny fahaiza-manao ary miantoka ny haavon'ny fiarovana;
• Fanatsarana ara-potoana ny sidina;
• Ny fizarana vaovao tsara kokoa amin'ny tambajotram-pitaterana an'habakabaka eropeana.
Mpitantana maro an'isa indrindra no manatrika ny International Hotel Investment Forum 2018
Nambara ny fironana momba ny dia an'arivony taonan'ny Kenya